पाण्डवले बनाएका थिए द्रौपदीसँग समय बिताउने अनौठो नियम !
एजेन्सी । शास्त्रमा महाभारतलाई पाँचौं वेद पनि भनिन्छ । यसको रचनाकार महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हुन् । उक्त ग्रन्थमा कुल एक लाख श्लोक छन् । यहाँ हामी उक्त ग्रन्थबारे केही रोचक जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौं ।
पाण्डवले द्रौपदीका लागि बनाएका थिए यी नियमः
द्रौपदीसँग विवाह भएपछि एक दिन नारदमुनि पाण्डवसँग मिल्न आए । उनले पाण्डवहरुसँग भने( प्राचिन समयमा सुण्ड(उपसुण्ड नामक दुई राक्षस दाजुभाइ थिए । उनीहरुले आफ्नो पराक्रमबाट देवतासँग पनि युद्ध जितेका थिए । तर, एक युवतीका कारण उनीहरुबीच फुट आयो र दुवैले एकअर्काको बध गरेका थिए । यस्तो अवस्था तपाईंहरुबीच पनि आउन सक्छ । त्यसकारण केही नियम बनाउनुहोस् ।
३. अर्जुनले श्रीकृष्णकी बहिनी सुभद्रा, नागकन्या उलूपी घ. अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा, नागकन्या उलूपी र मणिपुरकी राजकुमारी चित्रांगदासँग विवाह गरेका थिए । अर्जुनबाट सुभद्रा र अभिमन्यु, उलूपीबाट इडावान र चित्रांगदाबाट बभ्रूवाहन नामका छोरा जन्मिएका थिए ।
४. द्रौपदीको पाँच पाण्डवको तर्फबाट एक(एक पुत्र थिए । युथिष्ठिरको छोराको नाम प्रतिविन्ध्य, भीमको पुत्रको नाम सुतसोम, अर्जुनको पुत्रको नाम श्रुतकर्मा, नकुलको पुत्रको नाम शतानीक तथा सहदेवको पुत्रको नाम श्रुतसेन थियो ।